Okubalulekile kweSuper Nintendo [ivolumu 2] | Izindaba zamagajethi
Okufanele ube nakho kweSuper Nintendo [ivolumu 2]
Sizoqhubeka nomsebenzi wethu wokuthola ubukhazikhazi obudala be- Ubuchopho besilo eza ukukhanya ngokukhanya kwazo ngaphakathi kukhathalogi ebanzi yalokho okubizwa ngokuthi ama-super 16 bits of Nintendo. Futhi bekungekhona okungaphansi ukuthi ikhonsoli ithole lelo gama lesidlaliso, ngoba I-Super nintendo Kwakungumshini osebenza ngobuchwepheshe izimbangi zawo zazingakwazi ngisho ukuwufanisa: ake sicabange nje ngemiphumela etholwe yilokho okuthiwa imodi 7 noma izinzuzo zeprosesa yomsindo.
Nakulokhu futhi, siletha uhlu olugcwele okwakudala kwezinhlobo ezahlukahlukene iningi lenu, njengabachwepheshe abahle bendaba, elizokwazi ukuthi lingayibona futhi liyithande kanjani ikhwalithi yalo, kepha sizofaka nesithasiselo sokushiwo okuhlonipheke okufanelekile kahle. Hlala phansi futhi ulungele ukujabulela lokhu kukhethekile okusha kwe-retro kusuka Ama-Videogames.
I-Super nintendo Wathokozela izitolimende ezifika ezintathu ezikhethekile zalesi saga esidumile se Capcom, washaywa ngohlobo lomuntu uqobo ngokumelene nomakhelwane - noma ngabe siphelele, kwaqalwa futhi, yize kwenzeka eJapan nase-USA kuphela, I-Final Fight Guy, okubandakanya i-kimono ninja ebomvu njengomlingiswa odlalwayo, Guy, engekho ekuguqulweni kokuqala, futhi Sega, yize esukume UHaggar futhi inkampani ne Imigwaqo yeRage, angaba nohlobo oluphumelele kakhulu lwe- Impi yokugcina okwakho I-CD yeMega-. Kuyiqiniso ukuthi ichweba olitholile SNES Angikwazanga ukubhekana nawe, noma kude, okokuzijabulisa, ikakhulukazi ngenxa yokwehliswa kweqembu kubalingiswa ababili nokungabikho kwezinga. Noma kunjalo, Impi Yokugcina 2 Ibinendlela yabadlali ababili - ngaphezu kokusisa ukuvakashela izindawo ezahlukahlukene emhlabeni jikelele- kanti isitolimende sesithathu - okufunwa kakhulu emakethe yamasekeni- bekungukuqedela lapho leli saga livalelisa khona I-Super nintendo.
Ngaphandle kokungabaza ezingavamile ubengumlingani obalulekile ka Nintendo, zombili izingcezu zayo eziyi-16 nezingama-64, lapho inikeze khona izimangaliso ezingama-classics ayiqiniso namuhla. Enye yazo yile I-Killer Instinct, umdlalo wokulwa osebenzise ubuchwepheshe obufanayo be-ACM behluzo njengochungechunge I-Donkey Kong Country nokuthi uphakamise uhlelo oludlalwayo olususelwa kuma-combos aboshwe ngamaketanga angafinyelela kuma-hits amaningi, kufaka phakathi nokunyakaza kokugcina. Ukuguqulwa kwe- SNES Ngilubambe kahle kakhulu ucingo combo theoryBekubukeka kuyihlazo emshinini futhi bekuwumdlalo omnandi kabi. Njengoba wazi kahle, Microsoft isindise i-franchise, kulandela ukunxenxa okungenakubalwa okuvela kubalandeli, futhi njengamanje sinokubuyekeza kokubili I-Killer Instinct okwenziwe ngohlelo olulodwa lwe Xbox One, okwandisa okuqukethwe, kancane kancane, nezinkathi ezibizwa ngokuthi yizinkathi eziletha izinhlamvu ezintsha - yize kungakabikho ne-edishini ebonakalayo okwamanje.
Ama-Super Ghouls'n Ghosts
Elinye lamagugu wokuzijabulisa we Capcom futhi lokho futhi kwenza ukweqa ku SNES, ngokuthembeka okuphelele kwe-pixel. Ama-Super Ghouls'N Izipoki Wasiyisa ezindaweni ezimnyama ezazigcwele izidalwa ezesabekayo ezazimi phakathi kwe-knight yethu yezikhali - ngaphandle kwalapho wayegqoke izingubo ezincane - nenkosazana yathunjwa ngumholi omubi wazo zonke lezo zilo. I-arcade ebabazekayo namuhla egcinwe kahle sibonga imishini yayo elula kodwa emnandi. Kubi kakhulu ukuthi asikabi nayo eminye imidlalo ukwedlula uSir Arthur kusukela lokho kubuyekezwa kwe- PSP, futhi kubalulekile kwi-laptop Sony.
I-Teenage Mutant Ninja Turtles IV: Izimfudu Esikhathini
Njengoba ngishilo, ama-90s ayegcwele i-beat'em up enhle futhi lo mdlalo we Konami kungenye yama-greats kukhathalogi ye SNES. Ngokuya nge-arcade, le nguqulo ibingenayo imodi yabadlali abane - ibinokubambisana kwababili - kepha ibine Izinga elikhethekile engikutholile kuphela kule cartridge: the dreaded Unyawo Clan Technodrome. Inemibala, iyashesha, igcwele izinhlamvu ezivela ochungechungeni futhi, ngaphezu kwakho konke, imnandi, Izimfudu Ngesikhathi ngumdlalo othandwa kakhulu futhi okhunjulwayo, kangangokuthi uze waba nokubuyekezwa PlayStation 3 y Xbox 360, yize umphumela waba ngamanzi yonke indawo.
I-Super Mario World 2: Isiqhingi saseYoshi
Dlula i- Super Mario World okwangempela kwakunzima kakhulu, futhi mhlawumbe ngenxa yalokho, Nintendo nginqume ukuhamba nge-tangent futhi ngethula leplatformer ngemishini emisha edlalwayo ne-protagonist. Futhi umphumela wawungemubi neze. Mario wehliselwa ku-crybaby ngubani a YoshiUbungcweti ekuphonseni amaqanda, kwakudingeka azisindise ekubanjweni yizimbangi zoKoopa. Okudlalwayo bekuhluke kakhulu kune-SMW yasekuqaleni, ngoba isigqi sashintshwa iqiniso lokuthi kufanele ime ukuze ivikele amaqanda, futhi ngokubonakalayo yagqama ngokubonakala kwayo kwe-watercolor, enesiphetho esiyigugu, ngokuba yi-technical feat ku-Sphezulu nintendo sibonga ukusetshenziswa kwe-chip ISuper FX 2.
I-Street Fighter II Turbo
Nintendo ushaye igoli elibalulekile nge I-Street Fighter II ukuze SNES, nakuba Sega uphendule ukunyakaza nge I-Street Fighter II Special Champion Edition: yebo, I-Street Fighter II Turbo inguqulo yalo mdlalo kuye Ubuchopho besilo. Kamuva, saba ne- ISuper Street Fighter II noma I-Street fighter alpha 2 en SNES -ubani obengacabanga ukuthi impunga izonikeza impi engaka-, kepha abalandeli abaningi be-saga bacabanga ngalolu hlobo I-Turbo njengokulingana okuthe xaxa kokulethwayo okuhlukile okubone ukukhanya ku I-Super nintendo. Futhi ongakusho ngomdlalo ongazi kakade: awukwazi ukuqonda uhlobo lokulwa ngaphandle kwale titan Capcom.
Super Metroid kubhekwa ngabalandeli abaningi bamageyimu we SNES njengoCitizen Kane ovela kukhonsoli. I-gameplay yayo, ukusethwa kwayo kanye nokuklanywa kwayo ezingeni - lapho ingxenye yokuhlola ibibaluleke kakhulu - isafanele ukudunyiswa namuhla, futhi sekuphele iminyaka engama-20 lo msebenzi wobuciko waphila okokuqala ngqa I-Super nintendoAsikaze siwubone umdlalo onenkanyezi Samus aran up I-Metroid Prime, esinye isihloko esihlonishwa futhi njengoba ihlelo likhombisa ukuthi kunjalo. Uma unayo I-Super nintendo Kuphoqelekile ukuthi ugqoke ifayela le- Isudi Ebalulekile.
I-Super Mario Kart
I-Super Mario Kart kwakuwuhlelo okwakhishwa ngalo uhlobo lwekarting emidlalweni yejubane ye-arcade. Kuze kube namuhla, sibonile ama-clones amaningi - amanye aphumelela kakhulu kunabanye, ikakhulukazi ukukhumbula I-Crash Team Racing- kanye ne-saga uqobo Mario Kart kusesimeni, njengoba kukhonjisiwe Mario Kart 8. Ukuphonsa amagobolondo abulalayo, ama-banana peels asenze sashiya ithrekhi, ukusebenzisa kahle imodi yenganekwane 7 futhi ikakhulukazi amaphigi, amaphigi amaningi phakathi kwabangane, kwakungamanothi avelele kumdlalo ngamunye I-Super Mario Kart.
Umlando weZelda: Isixhumanisi Somlando
Elinye igugu elenziwe ngaphakathi Nintendo nokuthi, ngisho naseminyakeni edlule, ihlala iyigobolondo eligcina umlingo weqiniso. Umlando weZelda: Isixhumanisi Somlando bekuyi-adventure enkulu ye I-Super nintendo -umshini ojabulele ubuningi nekhwalithi enkulu ye-RPG-, enesiphetho somfanekiso esikhumbuleka kakhulu sesikhathi sawo -sikhuluma ngonyaka ka-1991-, izingoma ezaqoshwa ngomlilo nangezimishini ezidlalwayo okuthe noma kunjalo kuzo kwaphela iminyaka kwizitolimende ezahlukahlukene ze-saga - futhi lokhu bekuyinto ethize, kusobala. Kamuva, waba nechweba a I-Advance Advance yomfana wasibekelwa ubukhulu be Ocarina of Time -isisithunzi sayo sisekude-, kepha labo abaphila isipiliyoni sokuqala se- Isixhumanisi Esidlule abakwazi ukukhohlwa.
Umdlalo we Mario par ubuhle be I-Super nintendo futhi iningi lenu elizokhipha ngalo ama-bits akho ayi-16. Super Mario World inenqwaba yezimfanelo ezifanele ukuthweswa imiqhele njengomunye wemidlalo ehamba phambili hhayi emhlabeni kuphela Ubuchopho besilo, futhi kusuka emlandweni wamavidiyo wevidiyo: yethulwa Yoshi njengomlingani obalulekile wepulamba - ngaphandle kwakhe, ezinye izikrini bezingenakunqotshwa-, cishe amazinga ayikhulu inselelo enkulu kakhulu, izimfihlo zecascoporro, umsindo UKoji Kondo lokho kwenze indlebe yathandana, umdlalo wegeyimu ongafakwanga ibhomu -uphuze kuwo Super Mario Bros. 3- futhi kumnandi izinyanga ezinde okuqinisekisiwe. Super Mario World futhi kwaba ngesinye sezihluthulelo zempumelelo ye- SNES: Ngesikhathi yethulwa, bekukhona amaphakethe abandakanya lo msebenzi ongaphelelwa isikhathi wezinkundla ze-2D, isu lokuthi Nintendo izophinda ngokuzayo ngenguquko ye-polygonal ye- I-Super Mario 64.
Uhlu lwemidlalo emihle I-Super nintendo ibanzi impela: sikhuluma ngesinye seziduduzo zomdlalo wevidiyo omuhle kakhulu kanye neminyaka yegolide yemidlalo yevidiyo abaningi abayilangazelelayo. Phakathi kokukhethekile okubili okunikezelwe ku Ubuchopho besilo, sikunikeze iziqu ezingaphezu kwamashumi amabili ezichaza ngokuphelele ingqikithi yalo mshini omkhulu, udlula ezinhlotsheni ezahlukahlukene, njengokulwa, ukudlala indima noma amapulatifomu, yize sifuna ukuba nobulungiswa ngangokunokwenzeka futhi sizame ukungakushiyi lokhu amanye ama-cartridges amaningi akhethe impilo yabadlali abaningi. Ngaphandle kokuqhubeka kokuchitha isikhathi, ngezansi unohlu oluphelele lwemidlalo ehamba phambili ekhishelwe I-Super nintendo.
Ukuphefumula Komlilo 2
UKissy kaCastlevania Vampire
ICaper's Caper (uJoe noMac 3)
I-Contra III / Super Probotector
Crest Demist sika
I-Dragon Ball Z: Ubukhulu be-Hyper
Isibungu somhlaba uJim 2
Ukufa Kokufa Okukhethekile
UHagane: Impikiswano Yokugcina
I-International Superstar Soccer
UJoe noMac 2
IJurassic Park 2: Iziphithiphithi ziyaqhubeka
I-Kirby Super Star
Izwe Lamaphupho likaKirby 3
AmaKnights Of The Round
Inganekwane ye-Mystical Ninja
UMajuu Ou (Inkosi Yamademoni)
UMega Man X
I-NBA Give 'n Go
Umjaho Womqhudelwano Womhlaba Wonke kaNigel Mansell
Impi Ye-Ogre: Mashi weNdlovukazi Emnyama
Pocky namatshe 2
Umuntu Wangaphambi Kokuqala
Ukubuyiselwa kweDragon Dragon / Super Double Dragon 2
Imbongolo Yezwe Saga
I-Dragon Ball Z Super Butoden Saga
I-Final Fantasy Saga
I-Final Fight Saga
ISaga Street Fighter
I-Super Bomberman Saga
I-Saga Isifiso somlingo esilingana noMickey Mouse
NgoMgqibelo iSlam Masters (inguqulo yomdlali engu-4 ngemodi yomdlalo weqembu)
Impucuko kaSid Meier
I-Sonic Blast Man II
I-Stunt Race FX
ISuper Adventure Island I no-II
I-Super castleylvania IV
I-Super football champ (taito)
Super Ghouls N 'Izipoki
Super Mario All-Izinkanyezi
I-Super Punch Out
I-Super Smash TV
ISuper Star izimpi 1 2 no 3
ISuper Turrican 2
I-Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighters
Ukufa nokubuyela kukaSuperman: Super Brawling
I-Flintstones - Igugu leSierra Madrock (taito)
Inganekwane ye-Mystical Ninja Goemon 1 no-2
Ama-Vikings II Alahlekile (ama-16-bit Ocean Exclusive)
I-TMNT IV: Izimfudu Esikhathini
I-Top Gear 2 ne-3000
Amaphoyisa angaphansi komhlaba
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Ikhaya » Imidlalo yevidiyo » Okufanele ube nakho kweSuper Nintendo [ivolumu 2]
Ungazilanda kanjani ngesandla izinhlelo ze-Windows 8 zanamuhla
I-Checksum Qhathanisa: thola ukuthi ngabe imininingwane kuzinkomba ezi-2 inokuqukethwe okufanayo